घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्विस फुटबल खेलाडीहरू मानुएल आकानजी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो मनुएल आकांजीको जीवनी उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, अभिभावक, पत्नी, बच्चाहरू, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्य प्रस्तुत गर्दछ।
सरल शब्दहरूमा, यो फुटबलरको जीवन यात्राको कहानी हो, उसको बाल्यकालदेखि, जबसम्म उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकालको जाँच गर्नुहोस् - मानुएल आकानजीको बायोको एक सारांश।
मानुएल आकांजीको जीवनी। हेर, उहाँको प्रारम्भिक जीवन र उदय।
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ मानुएल आकांजी एक हो नाइजेरियन वंशका खेलाडी र आधुनिक केन्द्रीय डिफेन्डरको एक प्रोटोटाइप। यद्यपि, केवल केहि फुटबल प्रशंसकहरूले मानुएल आकांजीको जीवनी पढ्ने बारे विचार गरेका छन् जुन हामीले तयार गरेका छौं, र यो एकदम रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मानुएल आकानजी बाल्यकाल कहानी:
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उनका पूरा नामहरू मनुएल ओबाफेमी आकांजी हुन्। स्विजरल्याण्डको फुटबलर जुलाई १ 19 1995 July को जुलाई १ day तारिखमा उनकी आमा इजाबेल आकांजी र बुबा, स्विट्जरल्याण्डको नगरपालिका, नेफेनबाचमा अबीमबोला आकांजीको जन्म भएको थियो। तल चित्रित, सुन्दर मिश्रित-जाति बच्चा अकानजी परिवारको दोस्रो छोरा र पहिलो छोराको रूपमा संसारमा आईपुग्यो।
Ousmane Dembele बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य
मनुएल आकांजीको बाल्यकालको फोटोको सब भन्दा पहिले। सानो ओबाफेमी उसको परिवारको पहिलो छोरोको रूपमा जन्मेका थिए।
सानो मानुएल आफ्ना दुई बहिनीहरूसँग हुर्केका थिए जसले उनीहरूको नाम लिन्छन्; मिशेल र सारा। सबै भाई बहिनीहरू परिवारमा जन्मेका थिए जसमा खेलहरू तिनीहरूका सबै नसाहरूमा बग्दछन्। बच्चाको रूपमा प्रारम्भमा, मानुएल, सारा र मिशेल आफ्ना खेल-पागल अभिभावकहरूको पाइला पछ्याउन थाले जसलाई हामी अर्को उप-सेक्सनमा परिचय दिनेछौं।
इल्के गाउन्गान बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
मानुएल आकानजी परिवार मूल:
सबैभन्दा पहिले र स्विस फुटबलर एक स्विस आमा र एक नाइजेरियन बुबाको जन्म भयो। मानुएल आकांजीका बाबुआमालाई भेट्न सम्भव थिएन होला यदि उसको बुवाले नाइजेरियाको लागोसमा स्विट्जरल्याण्डको अन्यत्र सार्नको लागि आफ्नो फाइनान्सको काम छोड्नु हुँदैनथ्यो।
मानुएल आकांजीका अभिभावक- बुबा, अबीम्बोला आकांजी र आमा, इजाबेल आकांजी।
As बूंदेस्लिगाउनको रिपोर्टले यो बताउँछ कि, अबिम्बोला आकांजी एक नाइजेरियाली वित्तीय विज्ञ हुन् जसले एक पटक आफ्नो कान्छो उमेरमा शौकिया फुटबल खेल्थे। अर्कोतर्फ, उनकी आमा इजाबेल आकांजी, एक पूर्व टेनिस खेलाडी हुन्। यो सिकिसकेपछि, तपाईं मन्नुएलसँग एक उत्तम स्विस-अफ्रिकी मूल हो भन्ने कुरामा तपाईं मन्जुर गर्नुहुन्छ।
मानुएल आकांजी परिवार पृष्ठभूमि:
बुबाको साथ जो एक युरोपको प्रमुख वित्तीय केन्द्रहरू (ज्यूरिख) मा पैसा विशेषज्ञ छ निश्चित रूपमा धनी पृष्ठभूमिको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ। टेनिस खेलाडीको रूपमा काम गर्ने आमाको बारेमा चाहिं के भन्न सकिन्छ? माथिको आधार देखि, यो स्पष्ट Manuel Akanji एक महान परिवारको हो स्पष्ट छ।
आफ्नो शुरुआती दिनको फोटोलाई हेरेपछि, त्यो केटो बच्चाको जस्तो देखिन्थ्यो जसका आमा बुबाले उनलाई खेलको खेलौनाको पछिल्लो स afford्कलन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सानो छँदा सानो मनुएलले साइकल चलाउन मन पराउँथ्यो। नबिर्सनुहोस्, उहाँ एक आत्म-कबूल गरिएको म्यानचेस्टर युनाइटेड प्रशंसक हुनुहुन्छ।
खुसी बचपनको चिन्ह। मानुएल आकांजीका अभिभावकहरू प्रकारका हुन् जसले उनलाई खेलको खेलौनाको पछिल्लो स .्कलन गर्न सक्दछन्।
मानुएल आकानजी बचपन कहानी- शिक्षा:
औसत स्विस बच्चा जस्तै उनी4वर्षको उमेरमा बालवाडी र and वर्षको उमेरमा प्राथमिक स्कूल सुरु गरे। सुरुदेखि नै मनुएल आकांजीका अभिभावकहरूले शिक्षालाई धेरै महत्त्वपूर्ण ठाने। स्कूलमा छँदा, सानोले आफ्नो जोडीलाई संख्या र मानसिक अंकगणितको आउटस्क्लासिंगका लागि प्रतिष्ठा कमायो। विद्यालयमा आफ्नो अनुभवको बारेमा बोल्दै, अकांजीले एक पटक भने।
मलाई रमाईलो लाग्यो। तब पछाडि, यदि त्यहाँ पाँच बिभिन्न नम्बरहरूको साथ एक संकेत थियो भने, म यसको सबै प्रकारको अंकगणित कार्यहरू गर्दछु। म लामो संख्याहरू कण्ठ गर्न पनि सक्दछु।
चौथोदेखि छैठौं कक्षामा, मसँग एक शिक्षक पनि थिए जसले नियमित अंकगणितमा टूर्नामेंटहरू आयोजना गरे। यस प्रतिस्पर्धाले मलाई प्रेरणा दियो किनकि मँ हरेक चोटि जितेको थिएँ।
मानुएल आकांजी जीवनी- क्यारियर निर्माण:
एक सानो केटा, ओबाफेमी कक्षा फुट्दा र साथीहरूसँग स्कूल समाप्त भए पछि धेरै फुटबल खेल्थे। सुरुबाटै, उसको खेलकुद मोडेलहरू सँधै उसको नाइजेरियन बुबा अबिमोला नै रहेछन्।
मट्स हम्मेल्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
प्रारम्भमा, सुपर फादर जो एकपटक असफल क्यारियर थिए उनका छोराले सँधै उसको गल्ती सुधार्न र अकन्जी परिवारको सपनाहरू बाँच्न चाहेका थिए। उसको बुबाले कसरी उसलाई खेलमा प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा बोल्दै, म्यान्युएलले एक पटक भने;
म मेरा बुबाबाट फुटबल खेलिरहेको देख्दछु जबसम्म म यो आफैंले गर्न नपरोस्।
मैले टेनिस पनि गरें। तर जब फुटबल प्रशिक्षण अझ तीव्र भयो, मैले टेनिस र स्कूल छोडें।
मानुएल आकांजी बायोग्राफी- प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
Of बर्षको उमेरमा, जवान मनुएल आकांजी उनको छिमेकमा एक एमेच्योर खेल टोली एफसी वासेन्डान्जेनमा भर्ना भए। हुनसक्छ तपाईलाई कहिले थाहा भएन, जवानले आफ्नो क्यारियरको यात्रा केन्द्रीय मिडफिल्डर र एक विger्गर दुबैको रूपमा शुरू गरे। त्यतिखेर, सबैले उसलाई एक स्तरको टाउकोको केटोको रूपमा चिन्थे, जसले एक धेरै कलिलो उमेरमा सम्मान स collecting्कलन गर्न शुरू गर्नुभयो।
एन्ड्री यार्मोलेन्को बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
कस्तो तेज देखिन्छ बच्चा! युवा मनुएल आकांजीले धेरै कलिलो उमेरमै फुटबल पदक स began्कलन गर्न थाले।
११ वर्षको उमेरमा उनको पहिलो एकेडेमीले एफसी विन्थरथुरलाई धेरै आकर्षित गर्‍यो। यो ठूलो अकैडेमी हो जसले स्विस फुटबलको दोस्रो तहमा खेल्दछ। त्यहाँ, मनुएल आकांजी युवा वर्गको बीचमा उक्लिरहे, यो एक त्यस्तो उपलब्धि हो जुन एकेडेमीको सफल फुटबल स्नातकसम्म पुग्यो। नबिर्सनुहोस्, जवान १ about वर्षको उमेरमा केन्द्रीय डिफेन्डर मात्र भए।
मानुएल अकानजी जीवनी- फेम कहानी कहानी:
एकेडेमी स्नातक पछि, कडा मेहनत को लागी स्विट्जरल्याण्डका फुटबलर तुरुन्त विंन्डथुरको पहिलो टीमको हिस्सा बन्न पुगे। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मानुएल आकांजीको परिवारको आनन्दलाई कुनै सीमा थिएन जब उनी स्विजरल्याण्ड यु -२० टिमको सदस्य हुनका लागि एक राष्ट्रिय कल-अप भए। त्यो क्षणदेखि, उनलाई थाहा थियो कि उनी सुपर स्टारडमको लागि हो।
Jadon Sancho बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
राष्ट्रिय टोलीको साथ तीव्र प्रगति पछि, स्विजरल्याण्डको सब भन्दा ठूलो क्लब, एफसी बासेलले २०१ 2015 मा आकांजीलाई याद गरे र अधिग्रहण गरे। क्लबमा हुँदा सुपर सेन्ट्रल ब्याकले उनीहरूलाई स्विस कप र सुपर लिग डबल जित्न सहयोग पुर्‍यायो। यो उपलब्धि हासिल गर्दा युरोप बिग क्लबहरूले उनको सेवाहरूको लागि आह्वान गरेका थिए।
त्यसो भए उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेन
मैन्युएल अकानजी एफसी बासेल सफलता वास्तवमै उनको जीवनको मुख्य मोड थियो।
मानुएल अकांजी जीवनी- फेम टु फेम स्टोरी:
को प्रस्थान पछि Sokratis Papastathopoulos आर्सेनलको लागि बरुसिया डार्टमन्डले ग्रीकका जुत्ताहरू भर्नको लागि कसैको खोजी गर्न थाल्यो। भाग्यवस, मनुएल आकांजी BVB को अन्तिम विकल्प बने। राम्रो डार्टमन्ड क्यारियर सुरूवातले २०१ World वर्ल्ड कप कल-अपमा नेतृत्व गर्‍यो, जहाँ उहाँ सँगसँगै Haris Seferović, Granit Xhaka, र Xherdan शाकरी आदि स्विजरल्याण्डले नकआउट चरणमा पुग्न मद्दत गर्‍यो।
मनुएल आकांजीको जीवनी लेख्दा, केन्द्रीय डिफेन्डर हाल अनुभवी र एक मध्ये एकको रूपमा देखिन्छ बुन्डेशलिगाको सब भन्दा चाँडो। जर्मन क्लबमा सम्मिलित भएदेखि उनको सफलता उफ्रिनु भयो। मुश्किलले BVB ज्वाइन गरेको एक बर्ष, ओबाफेमीले उनको पक्षलाई २०१ the DFL - सुपरकर्प जित्न मद्दत गरे।
मानुएल आकांजीले बरुसिया डार्टमन्डमा हस्तान्तरण गरे पछि आफ्नो नाम राखे।
फुटबल फ्यानहरूलाई थाहा छ सुपर द्रुत केन्द्रीय डिफेन्डरहरू पत्ता लगाउन यो सजिलो छैन - मनपर्दोहरूको बारेमा कुरा गर्दै Raphael Varane। जे होस्, हामी मानुएल आकांजीको व्यक्तित्वमा नयाँ सीबी स्पीड-स्टार हेर्न पाउँदा खुसी छौं। यो केवल समयको कुरा हो जब स्विस फुटबलरले आफ्नो विश्व-वर्ग प्रतिभा बन्न पुग्दछ। बाँकी, हामी भन्छौं, अब ईतिहास हो।
मानुएल आकानजी प्रेम कहानी:
यति कडा यात्रा गरेपछि एक पेशेवर फुटबलर बन्नुहोस्, स्विस फुटबलरले कुनै बेला उसको बेटर आधा हुने कोही छ भन्ने महसुस गरे। उसलाई एक प्रेमिका चाहिएको थियो जसले आफ्नो भावनात्मक स्थिरता, प्रगति र एक फुटबलरको रूपमा दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्नेछ।
रबर्ट लुवेन्डोकी बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
मैन्युअल अकांजी पहिले तल बने, मेलानिया द्वारा:
मेलानीलाई भेट्नुहोस्, उनी मिठाई र एन्जेलिक पूर्व प्रेमिका र मानुएल आकांजीकी नाउ वाइफ हुन्।
लगभग years बर्ष पहिले यो मनुएल आकांजीको जीवनी लेखिएको भएदेखि, फुटबलरले एक प्रिटि डमसेललाई भेटे जो मेलानी विन्डलरको नामबाट जान्छ। उनीहरूको भेटले मित्रता र महत्वाकांक्षी आकांजीलाई जन्म दियो, उनीसँग मितिमा सोध्न उत्सुक भए। दुर्भाग्यवस, ऊ सबै कुरामा हतार गरीयो र तल झर्‍यो।
आकांजीले मेलानीको मुटु कसरी फिर्ता भयो:
चाखलाग्दो कुरा, प्रेमी केटा कहिल्यै हार मानेनन्। उनीहरूको पहिलो बैठकको तीन दिन पछि, मेलानिया विन्डलर चार वर्ष लामो बिद्यार्थी एक्सचेन्ज सेमेस्टरको लागि अमेरिकाको यात्रा गर्‍यो। मानुएल आकांजीले टाढा टाढा आफ्नो पीछा जारी राख्यो।
"म उनको लागि कुर्दै थिएँ," फुटबलर हाँस्दै व्याख्या गरे। "यस्तो धैर्यताले मलाई उनको मुटु जित्यो।"
मेलानी विन्डलर सेप्टेम्बर २०१ 2015 को वरिपरि मनुएल आकांजीको प्रेमिका बन्नुभयो। यो समय उनीसँग पनि मिल्छ जब उनी एफसी बासेलमा सामेल भए। यो त्यस्तो समय थियो जब उसले प्रसिद्धि प्राप्त गरेन।
पियरे-एमिरिक एबम्बेङ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य
मानुएल आकानजी, धेरै मान्छे जस्तै, आफूले माया गर्ने कसैको हृदय जित्न धैर्य लागू गर्नुपर्‍यो। उनी मेलानी, उनकी भावी पत्नी हुन्।
२०१ 2018 को अन्तिम क्वार्टरमा, सेप्टेम्बरको ठीक २th तारिखमा, स्विस फुटबलर अन्तिम प्रश्न पप गर्न पर्याप्त बोल्ड भए। ओबाफेमीले उनको प्रेमिका मेलानीलाई प्रस्ताव गरे। उनले क्याप्शनको साथ यसलाई इन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो;
उनी एक हुन्
मानुएल आकांजी र मेलानी विन्डलरले आफ्नो विवाह स्पेनको सब भन्दा ठूलो टापु मल्लोर्कामा २ 23 जुन २०१ 2019 मा मनाए। यो एक समारोह थियो जसलाई टोलीका साथीहरू, घनिष्ठ मित्रहरू र आमन्त्रित अतिथिहरूको रूपमा परिवारका सदस्यहरू छन्।
मानुएल आकानजीको विवाह- स्विस नाइजेरियालीले आफ्नो सुन्दर प्रेमिका मेलानीलाई जून २०१ in मा बिवाह गरे।
हात मिलाएदेखि दुबै मानुएल आकांजी र उनकी श्रीमती मेलानी लोकप्रिय युरोपियन समुद्री किनारमा नियमित रूपमा जीवनको आनन्द लिइरहेका छन्। तलका फोटोहरूबाट तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि दुबै अभिभावक हुन लागेका छन्।
दुबै प्रेमीहरूले लोकप्रिय समुद्र किनारका गन्तव्यहरूमा शान्त समय बिताउन रुचाउँछन्।
यो बायो राख्ने यस घडीमा, स्विस फुटबलर र तिनकी श्रीमती दुबै आमा र बुबाको बच्चा छन् जसलाई उनीहरूले नाम दिएका छन्। Aayden मलिक Adebayo Akanji। उसको बच्चाको बीचको नामले ऊ मुसलमान हो कि होइन भनेर प्रश्न खडा गर्छ। नबिर्सनुहोस्, सानो Aayden Akanji कोनोराभेरस महामारीको समयमा पैदा भएको थियो।
जीवन शैली तथ्यहरू:
फुटबलरका लागि पैसा ठूलो महत्त्वको हुन्छ र वास्तविक कारणको लागि खडा हुन्छ किन उसले यति कडा परिश्रम गर्दछ। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई बताउनेछौं कि मनुएल आकांजीले कसरी € ,48,000€,००० को साप्ताहिक ज्याला र २. million मिलियन डलर वार्षिक तलब प्रयोग गर्दछ।
मानुएल आकानजी कारहरू:
जो जान्दैनन् उनीहरूका लागि, फुटबलरले मेल खाने पोशाक लगाउन मनपराउँदछ, विशेष गरी एउटा जुन आफ्नो रेन्ज रोभर र su सूट गर्दछ। तल अवलोकन गरिए अनुसार, मानुएलको मनपर्दो रंग सेतो हो, र उसको सेतो पोलो लगाउन मन पर्छ, जुन उसको कारको रंगसंग मेल खान्छ।
चेकआउट मनुएल आकांजीको कार, रेंज रोभर। फुटबलर आफैंमा कसरी खर्च गर्ने थाहा छ।
यदि स्विस फुटबलर एक सबै सेतो कार र कपडा पोशाक मा ड्रेसिंग गरीरहेको छैन भने, तपाईले उसलाई आफ्नो दोस्रो मनपर्ने र in्गमा देख्नुहुनेछ जुन 'कालो' हो। अब एक प्रश्न! - के Manuel Akanji आफ्नो सेतो भन्दा कालो कार कपडा संगठन संग बढी कूलर देखिन्छ?
मानुएल आकांजीलाई आफ्नो कारसँग मिल्न कालो सबै कालो लुगा मनपर्छ। जसरी उसले आफ्नो सेतो क्लोज र कार आउटफिटसँग गर्छ।
केहि पनि छैन जुन फुटबलरहरु चौंला देखिन्छ उनीहरु लाई चार व्हील पावर बाइकमा हेर्दा। हाम्रो आफ्नै Manuel Akanji यसको एक ठूलो प्रशंसक हो। उसका सबै अटोमोबाइल संग्रहहरू देखेर, तपाईं हामीसँग सहमत हुनुहुनेछ कि उहाँ, एक ग्लैमरस साथी, दुबै दुखी र बाहिर।
चेकआउट मनुएल आकांजीको चार पहिया पावर बाइक। फुटबलरलाई उसको सम्पत्ती देखाउन मन पर्छ।
मानुएल आकांजी पारिवारिक जीवन:
एक नजिकको बुनेको बहुजातीय परिवारको मायालु अrace्गाले सबै न्यानोपन ल्याउँदछ, जुन एक प्रकारको एक हो र कहिँ बदल्न सकिदैन। सबैभन्दा प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड-नाइजेरियन परिवारलाई भेट्नुहोस् उनीहरू स्विजरल्याण्डको Wiesendangen मा रहेको आफ्नो परिवारको घर मा एक फोटो लिन्छौं।
मनुएल आकांजीको परिवारलाई भेट्नुहोस्। बाँयादेखि दायाँ हामीसँग सारा (जेठी बहिनी), मनुएल ओबाफेमी, अबीम्बोला (घरको मुख्य), इसाबेल (घरकी आमा) र मिशेल (अन्तिम जन्मेको बच्चा) छन्।
यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई मनुएल आकांजीको आमाबुबाको बारेमा उनको नाइजेरियन बुबाबाट शुरू हुने थप तथ्यहरू बताउनेछौं।
Manual Akanji बुबाको बारेमा:
सबैभन्दा पहिला र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, 'अबीमबोला' नाम गरेको सुपर बुबाले "अबी" उपनाम लिनु भयो। नाइजेरियाका बुबा एक वित्तीय विशेषज्ञ हुन् जसले अर्थशास्त्रको अध्ययन गरे र एक स्विस ऊर्जा र स्वचालन टेक कम्पनी एबीबीसँग काम गरे।
वर्ष २०० to देखि २०१० सम्म, अबीम्बोला आकांजीसँग आफ्नै देश (नाइजेरिया) मा काम गर्ने अवसर थियो। त्यस समयमा उनले आफ्नो परिवारलाई नाइजेरिया लगे र उनीहरूलाई परिवारका सदस्यहरूसँग परिचित गराए।
उनका बच्चाहरू खेलकुदमा यत्तिको सफल भएको देखेर अबीम्बोलाले कान्छो उमेरमा उनको फुटबल क्यारियर अन्त्य गर्ने शून्य पश्चाताप गर्न लगाएको छ। हो! तीनका बुबा एक पटक फुटबल र पछि टेनिस खेले तर सबै खेलहरू छोडे। अबिम्बोला यस्तो प्रकार हो जसले आफ्ना बच्चाहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउन मन पराउँदछ।
मानुएल आकांजी आफ्ना बच्चाहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउन मन पराउँछन्।
मैन्युअल अकांजीको आमाको बारेमा:
इसाबेल आकांजी सबैभन्दा प्रसिद्ध स्विस-नाइजेरियन परिवारको सुपर मम हुन्। तीन छोरीकी आमा आफै एक खेलकुद महिला हुन् (पूर्व टेनिस प्लेयर) जसले पछि भलिबलमा खेलाइन्। उनले आफ्नो श्रीमान अबीमबोला आकांजीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेटे जब उनी विदेशी भाषामा बस्थे।
मैन्युअल अकांजी सिस्टरहरूको बारेमा:
स्विस फुटबलरका दुई भाई-बहिनीहरू, सारा र मिशेल- सबै महिलाहरू छन्। उसको कुनै भाई छैन। मानुएलकी जेठी बहिनी- सारा १ 1993 XNUMX in मा जन्मेकी थिई, जसले उनलाई दुई बर्ष जेठो बनायो। अर्कोतिर, मिशेल आफ्नो भाई भन्दा छ वर्ष कान्छी छिन। तल मनुएल आकांजीको राम्रा-राम्रा बहिनीहरूको सुन्दर फोटो छ।
मनुएल आकांजीको बहिनीहरूलाई भेट्नुहोस्- सारा (बाँया) र मिशेल (दाँया)।
आकांजी भाई बहिनीहरू सबै खेलमा आउँछन्। कान्छो, मिशेल एक खेलाडी हुन्। जेठी, सारा अकांजी (उनको भाइ मानुएल जत्तिकै) एक फुटबलर र एक रक्षक पनि हो। उनी एक पटक एफसी विन्टरथुर र एफसी सेन्ट ग्यालेनका लागि खेले, सबैभन्दा बढी स्विस महिला लिगमा। दुबै सारा र मनुएल धेरै नजिक देखिन्छन्, फुटबललाई सबै धन्यवाद।
सारा र मनुएलले आकांजीको प्रोफेशनल फुटबलरहरू बनाउँदछन्।
मानुएल आकांजीको परिवार स्विस राजनीतिमा पनि चिनिन्छ:
के तपाईंलाई थाहा छ?… सारा अकांजी केवल एक फुटबलर मात्र होइन तर स्विस स्थानीय राजनीतिज्ञ पनि हुन्। उहाँ एक पटक स्विस क्यान्टन काउन्सिल चुनावमा भाग लिनुभयो। हामीले मानुएल आकांजीको जीवनी लेख्दा, उनकी बहिनी सारा भर्खरै ज्यूरिखको क्यान्टोनल काउन्सिलको सदस्यको रूपमा नियुक्त भएका छन्।
कुनै श doubt्का बिना, मनुएल आकांजीका अभिभावकले दुई फुटबलर र एक एथलीटलाई मात्र जन्माएनन्, तर साराको व्यक्तित्वमा राजनीतिज्ञ पनि थिए।
मानुएल आकानजी व्यक्तिगत जीवन:
सबैभन्दा पहिले र स्विस फुटबलर एक बाल एक्टिभिस्ट हुन् र जसले आफ्नो आत्मविश्वासलाई अहंकार गर्न मिल्दैन। केही प्रशंसकहरू भन्छन् कि उसको तरिका अचानक छ, तर उसको बारेमा केहि पनि छैन जुन नक्कली, अति आत्मविश्वासी र अहंकारी हो।
अधिक, स्विस सेन्टर-ब्याकमा उल्लेखनीय संचार कौशल छ। मानुएल अ French्ग्रेजी, फ्रान्सेली र जर्मन संग अस्खलित छ, केवल स्पेनिश हराइरहेको छ। अन्तमा, उनी समुद्री किनारका व्यक्ति हुन् जसले कार्डहरू खेल्न मन पराउँछन्, बास्केटबल मन पराउँछन् र नाइजेरियाली राष्ट्रिय टोलीलाई कडा समर्थन गर्दछन्।
मानुएल आकानजी व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईंलाई उसको व्यक्तिको वास्तविक तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
मानुएल आकानजी अनटोल्ड तथ्यहरू:
तथ्य # १- BVB तलब ब्रेकडाउन र जर्मन औसतसँग तुलना:
यस तालिकाले मानुअल आकांजी (लेखेको समयमा) प्रति अवधि र मुद्रा कमाउने कुरामा गहन अन्तर्दृष्टि दिन्छ।
स्विस फ्रैंक (CHF) मा आय
प्रति वर्ष CHF 2,654,288.53 € 2,503,845 £ 2,245,321 $ 2,764,462
प्रति महिना CHF 221,191 € 208,654 £ 187,110 $ 230,372
प्रति हप्ता CHF 50,966 € 48,076.9 £ 43,113 $ 53,082
प्रति दिन CHF 7,281 € 6,869 £ 6,159 $ 7,583
प्रति घण्टा CHF 303.4 € 286 £ 256.7 $ 316
प्रति मिनेट CHF5€ 4.8 £ 4.3 $ 5.3
प्रति सेकेन्ड CHF 0.08 € 0.08 £ 0.07 $ 0.09
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो मानुएल आकांजीबायो, यो उसले कमाएको हो।
औंसजीको मासिक तलब कमाउन औसत जर्मन नागरिकले Ak Ak Ak० युरो प्रति महिना कमाएको छ भने कम्तीमा छ वर्ष nine नौ महिना काम गर्नुपर्नेछ। जबकि औसत स्विस नागरिकले तीन बर्ष काम गर्नुपर्नेछ।
तथ्य # १- उसको बीचको नाम 'ओबेफेमी' उसको कपालमा के सम्बन्धित छ:
उसको कपाल अनुसरण गर्ने मुकुटको नाइजेरियाको सम्पदासँग केहि सम्बन्ध छ।
गहिरो नोटिस लिईएको छ भने, तपाईंले कपाल काट्ने आफ्नो कपालको शैलीको भागको रूपमा हेर्नुहुनेछ। यसले ट्रफीलाई स doesn't्केत गर्दैन तर उसको नाइजेरियाली योरूबा बीचको नाम 'ओबाफेमी' को अभिव्यक्ति।
मानुएल आकांजीका अभिभावकले उनलाई नाइजेरियाली योरूबा नाम 'ओबाफेमी' बोक्न लगाए जसको अर्थ हो 'राजाले मन पराउनु'। सारांशमा, उनको ट्रेडमार्क काटेको मुकुटको नाइजेरियाको सम्पदासँग केहि सम्बन्ध छ।
तथ्य # १- मानुएल आकानजीको ट्याटूको अर्थ:
उसको ट्याटूको सबैभन्दा स्पष्ट भनेको एक हो; 'तिनीहरूलाई गलत प्रमाणित गर्नुहोस्'। मानुएल आकांजीसँग यो ट्याटू त्यस्तो समयमा थियो जुन उसले फोर्नबाट टाढा क्रूसिएट लिग्मेन्टको कारण ११ महिना टाढा बिताए। ट्याटूको उद्देश्य उनका आलोचकहरूलाई चुप गराउन थियो, विशेष गरी जसले आफ्नो करियर सकिएको महसुस गर्थे र जसले चोटपटक पछि पनि यसलाई बनाउँदैनन् भन्ने सोच्छन्।
मानुएल आकांजीको ट्याटूको अर्थ
दोस्रो सबैभन्दा उल्लेखनीय ट्याटू त्यो छातीमा छ जुन उसको परिवारको लागि बनाइएको थियो। यसले पढ्छ 'परिवार त्यो हुन्छ जहाँ जीवन सुरु हुन्छ र प्रेम कहिले समाप्त हुँदैन। '
तथ्य # १- आफ्नो फिफा तथ्या What्क के भन्छ:
तल दिइएका तथ्या from्कहरू हेर्दा, तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ कि Akanji सँग सब भन्दा बढि आधुनिक CB चाहिन्छ। स्विस फिफा तथ्या .्क धेरै त्यस्तै देखिन्छ जोस गिमिनेज.
ओबाफेमीको फिफा तथ्या .्कले देखाउँदछ कि ऊ अझै आफ्नो चरम सीमामा छैन
तथ्य # १- के हुन्छ हुन सक्दछ यदि फुटबलले कहिल्यै काम गरेन भने:
आफ्नो युवा प्रतिष्ठानमा हुँदा, स्विट्जरल्याण्ड डिफेन्डर आंशिक समय अध्ययन गर्थे। स्विट्जरल्याण्ड (उमेर १ 15) मा स्कूल पूरा गरेपछि, मनुएल आकांजीका अभिभावकले उनलाई व्यापारी बन्नको लागि प्रशिक्षुता योजनामा ​​भाग लिन जोड दिए। कारण यो थियो यदि ऊ फुटबलले काम नगरेको खण्डमा केही चीज थियो। म्यानुएल भाग्यशाली फुटबल बाहिर काम थियो।
पुरा नाम: मानुएल ओबाफेमी आकांजी।
जन्मे: १ July जुलाई १ 19 1995 Ne नेफटेनब्याक, स्विजरल्याण्डमा।
अभिभावक: इसाबेल आकांजी (आमा) र अबीम्बोला आकांजी (पिता)
Siblings: सारा आकांजी (जेठी बहिनी) र मिशेल आकांजी (कान्छी बहिनी)
पत्नी: Melanie Akanji। पहिले मैलनी विन्डलरको नामले परिचित प्रेमिका
परिवार जरा: स्विस-नाइजेरियन पूर्वज
कुल मूल्य: लगभग $ मिलियन (२०२० फिगर)
उचाइ: १.1.86 मिटर वा Fe फिट १ इन्च।
रुचि: बास्केटबल, टेबल टेनिस र टिभी कार्यक्रमहरू हेर्दै।
पहिलो भूमिका मोडेल: राउल (रियल म्याड्रिड लीजेंड)।
वर्तमान भूमिका मोडेल: सर्जियो रामोस
मनपर्ने रंग: कालो र सेतो
कुनै श doubt्का बिना, मनुएल आकांजी एक ठूलो प्रतिभा हो र एक महान केन्द्रीय डिफेन्डर को चिनो हो। कृपया हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा बताउनुहोस्, तपाईं हाम्रो लेखन र फुटबलरको बारेमा के सोच्नुहुन्छ। उल्लेखनीय डिफेन्डरको जीवन कहानी पढ्न को लागी धन्यवाद।
डर्टमन्ड फुटबल डायरी
Jude Bellingham बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
एरलि Ha हालान्ड बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
अलेक्जेंडर इस्क बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
थमस Tuchel बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 29, 2020
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 21, 2020
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 11
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 4
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 3
तपाईंको इनबक्समा फुटबलका समाचारहरू प्राप्त गर्नुहोस्